balaastigga dheecaanka biyaha ee PVC-U tuuray biibiile toosan
Tuubooyinka PVC waxaa si weyn loogu adeegsadaa dhismaha warshadaha iyo madaniga, oo ay ku jiraan bullaacad gudaha iyo dibedda ah, mashruuca tuubada bullaacadaha, nidaamka waraabka beeraha, bullaacadaha kiimikada, bullaacadaha, waxay sidoo kale ku habboon tahay dhuumaha hawo-qaadista iyo dhuumaha dheecaanka, iwm.
balaastigga dheecaanka biyaha PVC-U tuubo toosan
Meelaha dalabka: dareeraha (dareeraha, gaaska, budada qalalan, qalabka iyo warbaahinta kale) dhuumaha saliida, kiimikada, elektarooniga, dhismaha maraakiibta, sameynta waraaqaha, LNG, warshadaha militariga, metallurgy, bixinta biyaha iyo qulqulka, daawo, injineernimada bayoolajiga iyo warshadaha kale ama mashaariicda injineernimada] ASTM A321,ASTM A778,ASTM A789,ASTM A790,ASTM A358 qeexitaannada iyo cabirradu waa sida soo socota(Qeexitaanka cabbirka wuxuu kaliya buuxiyaa ASME B36.19M,B36.01M)
tuubada caaga ah ee bullaacadaha biyaha ka sameysan ee PVC
warqad kartoon jir jir aasaaska fiber fiber dardaro filter hawada
Miiraha ayaa adeegsada fiber cusub oo dabiici ah iyo fiber galaas sida sheyga shaandhada, ka dib markii laalaabo, wuxuu leeyahay waxtarka sifeynta sare, awoodda haynta boodhka sare, iska caabinta hoose iyo astaamaha kale. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay hawada nadiifinta hawada ee hawada cusub ee nidaamka qaboojiyaha guud, nidaamka nadiifinta hawada iyo buufinta nidaamka saadka hawada, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa miiraha hore ee shaandhada waxtarka dhexdhexaadka ah si loo kordhiyo nolosheeda adeeg. Guud ahaan heerkulka adeegsiga ee ka hooseeya 93 darajo.
aluminium la beddeli karo la miiro filter hawada hore
Miiraha ayaa adeegsada fiber-ka cusub ee loo yaqaan 'polyester synthetic fiber' sida walxaha shaandhada, ka dib marka la xirto, wuxuu leeyahay waxtarka sifeynta sare, awoodda haynta boodhka weyn, iyo iska caabin hooseysa oo leh shaandhada la beddeli karo, kharashka hawlgalka oo yar iyo astaamo kale.
nooca taangiga aan kala-goynta lahayn ee filterka waxtarka badan
l majiro shaandho baxeeysa oo soo raaci karta adeegsiga qalab gaar ah oo jel u eg.
partiton pleat awoodda waxtarka sare HETA filter ee elektaroniga qolka nadiifinta tiyaatarka dawooyinka
Miiraha ayaa ansixiya warqad fiber muraayad ah oo aad u-ganaax ah sida alaab ceyriin ah, iyo warqad dejisan oo ah guddiga kala-goynta, oo ku sameysma sanduuqa galvanized, alloy aluminium, iyo xabagta. Badeecadani waxay leedahay astaamo waxtarka sifeynta sare, iska caabin hooseysa, awoodda haynta boodhka waaweyn iyo qiimaha dhaqaale. Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa dhamaadka 's nadiifinta hawada nidaamka guud ee qaboojiyaha, nidaamka nadiifinta hawada iyo buufinta nidaamka sahayda hawada cusub. Guud ahaan, heerkulka cimilada ayaa ka yar 60 darajo. Waxyaabaha xuduudaha waa sanduuqa galvanized iyo aluminium.
V-filter miiraha sare
Naqshad V-qaabeeya oo leh shaandhada jilicsan ee ugu yar, waxay leedahay aag miira badan marka loo eego miiraha dhaqameed. Aagga miiraha ballaaran ayaa xamili kara mugga hawo weyn, sii wadi kara hoos u dhaca cadaadiska iyo kordhinta nolosha adeegga shaandhada. Waxyaabaha Sifeeyaha: sheyga shaandhada ayaa qaata fiber galaaska superfine-ka ah oo lagu soo ururiyey xayndaabka pleating.The warqadda shaandhada waxaa lagu kala saaraa xabagta dhalaalka kulul, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa qaboojiyeyaasha iyo meelaha kale ee leh shuruudaha adag ee hawada.
waxtarka sare ee leh qaybta aan lahayn qaybta hawada
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa bixinta hawada dhamaadka warshad nadiif ah, sida: dawooyinka, caafimaadka, cuntada, elektaroniga, daahan sax ah iyo warshado kale.
Alaabtu waxay isticmaalaan riixo farsamo, iyo qalabka sanduuqa waa GB saxan duuban oo qabow.
Daaweynta dusha sare ee sanduuqa ayaa kobcisa buufin fosfayt ah, oo leh adkeysi daxal adag.
Taxane FL filter hawada heerkulka sare wuxuu isticmaalaa fiber galaas ultrafine sida warqad filter, aluminium bireed sida SEPARATOR, iyo ahama sida jir. Waa la xiray oo waxaa lagu qalabeeyay caag heerkulkiisu sareeyo oo la soo dhoofiyay. Shaandheeye kastaa wuxuu dhaafey tijaabooyin adag oo leh hufnaan sifeyn sare, iska caabin hooseysa, awoodda haynta boodhka weyn, iyo u adkeysiga heerkulka sare Waxaa badanaa loogu talagalay qalabka nadiifinta hawada heerkulka sare iyo nidaamyada u baahan khadadka wax soo saarka daahan sare sida qalajinta
kala saar filter hufnaan dhexdhexaad ah
Miiraha ayaa qaadanaya qaybinta wavy-qaabeeya L. Ka dib sameynta, waxay leedahay waxtarka sifeynta sare, awoodda haynta boodhka waaweyn, mugga hawo miiraha sare iyo qaababka kale Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa dhamaadka 's nadiifinta hawada nidaamka guud ee qaboojiyaha, nidaamka nadiifinta hawada iyo buufinta nidaamka sahayda hawada cusub. Heerkulka guud ee adeegsiga ayaa ka yar 80 darajo. Waxyaabaha xudduudda waa xaraashka galvanized, aluminium aluminium, iyo birta birta ah ee birta ah.